Ny fampihorohoroana mifototra amin'ny Creepypasta dia azo tsapain-tanana ao amin'ny Trailer ho an'ny 'We're All Go to the World's Fair'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny fampihorohoroana mifototra amin'ny creepypasta dia azo tsapain-tanana ao amin'ny Trailer ho an'ny 'Handeha amin'ny Foara Manerantany Isika Rehetra'
Ny fampihorohoroana mifototra amin'ny creepypasta dia azo tsapain-tanana ao amin'ny Trailer ho an'ny 'Handeha amin'ny Foara Manerantany Isika Rehetra'
Toy ny Channel Zero sy The Empty Man
by Trey Hilburn III Janoary 14, 2022 5,640 hevitra
If Channel Zero ary Ilay lehilahy banga dia nampianatra anay na inona na inona fa ny Creepypasta teraka amin'ny aterineto dia loharanon'ny tantara mampihoron-koditra tena mampatahotra sy tany am-boalohany. Tale, Jane Schoenbrun's Handeha amin'ny foara manerantany isika rehetra dia mitsoraka ao anatin'io ranomainty tena mampihoron-koditra io mba hanomezana antsika ny valin'ny "Fanamby an'izao tontolo izao"
Handeha amin'ny foara manerantany isika rehetra manana an'io miorim-paka amin'ny horohoro ao amin'ny atmosfera io Ilay lehilahy banga ary Channel Zero. Ny fitokana-monina fanampiny sy ny claustrophobia amin'ireo lahatsoratra ao anaty horonan-tsary ireo dia mangatsiatsiaka ho azy ireo tsy misy karazana contexte akory.
Ny synopsis ofisialy ho an'ny Handeha amin'ny foara manerantany isika rehetra mandeha toy izao:
Alin'ny alina mangatsiaka any Etazonia, i Casey zatovo (Anna Cobb ao amin'ny lahateniny voalohany) dia mipetraka irery ao amin'ny efitrano fatorian'ny efitra fatoriana, mivezivezy amin'ny Internet eo ambanin'ny kintana mamirapiratra sy ny afisy mainty izay manarona ny valindrihana. Nanapa-kevitra ihany koa izy tamin'ny farany fa handray ny World's Fair Challenge, lalao mampihoron-koditra an-tserasera, ary handray ny tsy fahatokisana ampanantenainy. Aorian'ny fanombohana dia mirakitra an-tsoratra ny fiovana mety hitranga aminy izy na mety tsy hitranga aminy, manampy ny traikefany amin'ny fanodikodinam-peo an-tserasera azo jerena eran-tany. Rehefa nanomboka very ny tenany teo anelanelan'ny nofinofy sy ny zava-misy izy, dia nisy olona mistery nanatona, nilaza fa mahita zavatra manokana ao amin'ny fampiakarana azy.
Ilay sarimihetsika dia manana an'i Anna Cobb amin'ny anjara asan'ny mpanao gazety amin'ny sarimihetsika. Mbola tsy nahita manokana an'ilay sarimihetsika aho, fa i Kelly McNeely anay manokana kosa dia nitabataba momba ilay sarimihetsika tamin'ny Fetiben'ny Fantasia. Vetivety dia lasa iray amin'ireo sarimihetsika izay miditra haingana amin'ny famoahana horohoro nantenaiko indrindra.
Manantena aho fa ny tantaran'ny Creepypasta dia lasa loharanon'ireo mpamokatra sarimihetsika vao haingana. Betsaka ny fampihorohoroana miandry hojerena.
Handeha amin'ny foara manerantany isika rehetra ho avy hisafidy ireo teatra sy amin'ny fangatahana manomboka ny 22 aprily.